रामचन्द्र पौडेलले किन गरे राजनीतिबाट अलग्गिने कुरा ? - Himali Patrika	रामचन्द्र पौडेलले किन गरे राजनीतिबाट अलग्गिने कुरा ? - Himali Patrika
रामचन्द्र पौडेलले किन गरे राजनीतिबाट अलग्गिने कुरा ?
Himali Patrika प्रकाशित मिती - २२ मङ्सिर २०७८, बुधवार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने बताउन थालेका छन् । आफ्नो समूहबाट १४औं महाधिवेशनमा सहमतिमै सभापतिको उम्मेद्धवार तय गर्न सकस भएपछि पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सबैले सभापतिमा दबी नछाड्ने हो भने आफू राजनीतिबाट अलग हुने बताएका छन् । बुधबार नेता प्रकाशमान सिंहको चाक्सिबारीस्थित निवासमा साझा उम्मेदवार चयनका लागि बसेको संस्थापन इतकरको बैठकमा सभापतिका आकांक्षी सबैले अडान कायम राखेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले आफू राजनीतिबाट अलगिएर आराम गर्ने बताए।
पौडेलले सभापतिमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको भएपनि नेताहरु शेखर कोइराला तथा प्रकाशमान सिंहले दाबी नछाडेपछि पौडेलले यस्तो बताएको बैठकपछि नेता रामशरण महतले जानकारी दिए । नेता पौडेलले अरु सबै एक भए आफू त्याग गर्न तयार रहेको बताउँदै नभए आफूलाई सभापति छाड्नु पर्ने बताएका थिए।
ुरामचन्द्रजीले पनि मलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो। प्रकाशमानजीले पनि म पनि लड्छु भन्नुभएको छ। शेखरजी पनि लड्ने भन्नुभएको छु बैठकपछि महतले भने । पौडेलले सबै लड्ने भए आफू राजनीतिबाट बिदा बताएको महतले उल्लेख गरे । ुसबै लड्ने भए म राजनीतिबाट बिदा हुन्छु, आराम गर्छु। पार्टीबाटै अलग हुन्छु’, बैठकमा पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै महतले भने ।
संस्थापन इतरबाट आज सभापतिको साझा उम्मेदवार चयन गर्ने भनिएको भए पनि नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा पुनस् भोलि विहान आकांक्षी बाहेकको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ ।